March | 2012 | Aung Ko Htwe Personal Website
Man city Vs Sunderland Man city wings Nasri and adam johnson ** midfield dmf + silva + yayatore** back lascott +company ** or toure + company ** striker aguero or barloteli or tevex Dordmond Vs Stugart liverkusen Vs Friburg
CHAMPION LEAGUE 1 ST LEG Benfica Vs Chelsea chelsea midfield esien + lampard + mata esien + miralet + mata wings kalue + sterige Appole Vs real Apole team work /work hard real attack Merseille Vs Bayern bayern two wings … Continue reading →
New albumဲပြန်မယ် 56
တရုတ်ကနည်းပညာမရှိမဟုတ်ရှိတယ် … ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်တွေရှိတယ် … သူတို့စီမှာတောင်နည်းပညာ မှားယွင်းမှုတွေ ရှိတယ် … စီးပွားရေးအဓိကနိုင်ငံဖြစ်တယ် … ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင်တော့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပွင့်လာမယ် လို့ ယူဆရတယ် … စီမံကိန်းဆိုတာ မလုပ်ရင်လည်း တိုင်းပြည်မတိုးတက် … လုပ်ရင်လည်း အောင်မြင်အောင် ၊ရည်မှန်းချက်အတိုင်းရောက်အောင်၊ အကျိုးရှိအောင် လုပ်ရမှာပဲ … ဥပမာ ။ ။ ကောလင်း ရွှေထုတ်လုပ်ရေး စစ်အစိုးရ သင်ခန်းစာယူရမယ် ဂျပန် ၊ ယူဂို လွန်ဆွဲ ဈေးနည်းတဲ့ ယူဂိုရ … Continue reading →
myanmar flag အုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်တော့ဖြစ်ချင်တယ် …
စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်က ခုမှ နုနုနယ်နယ် လမ်းလျှောက်တတ်စ ရှိသေးတယ် …ကြီးကြီးးမားမား အရေးယူလိုက်ရင် … နောက်ဆို …ဘာမှမရေးရဲဘဲ ….အကြောက်တရားစိုးမိုးသွားနိုင်တယ် … ညင်ညင်သာသာပဲကိုင်တွယ်သင့်တယ် … ကာတွန်းတွေမှာတိုက်ရိုက်ပုံတူရေးပြီး ဝေဖန်တဲ့ခေတ်တောင်ရောက်ရအုံးမှာ … ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲလေ …
Chelsea Vs Spurs liverpool Vs Wigan Stoke Vs Man city man city needs to strong midfield in away silva +yaytore + dmf back lascott + company toure +company Ac Vs roma Juventus Vs Inter Bayern Vs Hannover Schalke Vs Liverkusen … Continue reading →
Man city Vs chelsea savic usedalittle problem lascott +toure good lascott+ company good toure + company good second half take care
new movie လမ်းတွေ ပွင့်လင်းလား ? ၂၄ ကတော့မျိုသိပ်ထားတတ်တယ် တခါတလေ …
မြန်မာနိုင်ငံ မှာလူတော်တွေများကြီးရှိပါတယ် … ခေတ်အဆက်ဆက် … ကနောင် မင်းသားကြီးတို့ လိုစသည် ဖြင့် …ဦးသန့် … လူမှန်နေရာမှန် အသုံးချဖို့လိုတယ် …. ပညာရှင်တွေဖော် ထုတ် နေရာပေးရမယ် … ပညာရေးက ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပဲ … *********************************** အရင်တပါတ်က ရေးထားတာလေးတွေ မေးကြလို့ စိတ်ဝင်စားကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်တစ်ပါတ်မှာ ဖြေရေးပေးပါအုံးမယ် … ***********************************